Home || Online Tahalka भड्कीलो भन्दा तिजलाई सन्देशमुलक बनाउने कि ?
हिन्दु महिलाहरुको महान चाड हरितालिका तीज । तीज शुरु हुन थालेसंगै महिलाहरुमा एक प्रकारको छुट्टै आन्नद र हर्षोल्लास देख्न सकिन्छ । तिजको बेलामा आफन्त हरुलाई बोलाई घरमा अनेक थरीका मिठा मिठा खाने कुरा हरु खुवाउने र माया साटा साट गर्ने चलन छ । हरेक दुख र पीडा विर्षदै दिदी बहिनी हरुले मिठा खाने कुरा खाने र नाच्ने गाउने गर्छन् ।
तर पछिल्लो समय तीजको मौलिकता हराउदै गएको छ । तीजको मौकामा साथी र आफन्त संग बसेर दर खाने नाममा महिला दिदि बहिनी हरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । खाली गर गहनाको प्रदर्शन र कुनै काम नगरी नाचगान को शूुरुवात हुन थाल्यो भन्ने पुरुष दाजुभाई हरुको कटाक्ष पनि सुन्ने गरिन्छ ।
अहिले पनि तीजको वारेमा सामाजिक संजालहरुमा विभिन्न खालका बहसहरु देख्न र पढ्न पाइन्छ । कतिपयले लेट पोष्ट भन्दै तिजको दर खाएका तस्वीरहरु पोष्टिएका देखिन्छन् त कतिपयले तिजको लागी गरिएका भड्कीला तयारीहरु फेसवुकका वालभरी देखिन्छन् । दरखाने कुराको त दरखादा विरामी पर्न थालेका घटनाहरु सामाजिक संजालभरी छताछुल्ल छन् । तिजलाई भड्कीलो बनाउन कलाकार मात्रै हैन संचार माध्यमहरु पनि आरोप मुक्त छैनन । असार लाग्नै पाको हुदैन ताइ न तुईका तिजको गित बजाएर तिजलाई भड्कीलो बनाउने प्रेरित गरेको आरोप पनि संचार माध्यमहरुलाई छ ।
तीज आउनै लाग्दा घर धन्दा गरी बसेकी महिलाहरु लाई कहिले माईत जाम्ला भन्ने हुन्छ । तर सहरिया महिलाहरुलाई यस्तो सोच्ने कुराको फुर्सदनै छैन । साथीसंगीहरुको अनुरोधमा ससानो कुरामा पनि पार्टी खाने र खुवाउने प्रचलन बढेको बेला त तीज महिना शुरु हुने दिन देखी नै दिनदिनै दर दिनदिनै नाच गान । अनि दिनदिनै फरक पहिरन संगै गहना प्रदर्शन । पछिल्लो समय महिला हरुले संगै बसेर नाचगान गर्ने र मिठो मसिनो खाने कुरा पनि पहिले जस्तो रहेन । बुढापाका आमाहरु भन्नु हुन्छ अहिले महिना शुरु नहुंदै साथीहरु मिलेर दर खाने चलन बढेको छ । हाम्रो पालामा त यस्तो थिएन् ।
तीजको अघिल्लो दिन माईतीमा गएर आमाले पकाको पुवा, काँक्रा, आलु, करेला आदिको अचार, सेलरोटी जस्ता थरीथरी खानेकुरा खाने र चेलीबेटीलाई खुवाउने चलन थियो । तर अहिले साथीसंगी बसेर हामी बुढापाकालाई घरमा एक्लै छाडेर बाहिर तिर दर खाने जमाना आयो । चाडपर्व आउँदा घरनै सुनसानहुने बरु चाडपर्वनै किन आउछ होला भन्ने लाग्छ ।उहिले त दर कहिले खान पाउँला भनेर दिन गनेर बस्ने हुन्थ्यो । तर अहिले यस्तो छैन् । छोरी कहिले आउले भन्दा बाटो कुरेर बस्ने गछौं तर यस पालीको तीजमा पुर्सद छैन भन्दै माईतीमा आउन पनि मन गर्देनन । बरु साथी संगी संग एक महिना अघि देखी दर खाने समय हुने माईती आउने फुर्सद छैन भन्दा सारै पिर लाग्छ ।
महिलाहरूको महान पर्व तीज भन्दा अघिल्लो दिन लाई दर खाने दिन भनिन्छ । विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायुको कामना तथा अविवाहित हरूले योग्य पतिको माग गर्दै तीजको दिन निराहार व्रत बस्ने उद्देश्यले अघिल्लो दिन मिठामिठा खानेकुरा खाने गर्दछन् । घरघरमा खासगरी दुघ्द्ध जन्य परिकार तयार गरी दर खाने चलन रहेको छ । महिलाहरू यो दिन माछामासु वाहेक चोखो चिज खाएर भोलि पल्ट निराहर व्रत बस्ने गर्दछन् ।
दरमा खिर, पुवा, सेलरोटी अचार खाने गरिन्छ । हुन त ठाउँ अनसार दरखाने परिकारहरू फरक फरक छन् त्यस्तै आधुनिकता सँगै यसमा खाने परिकारहरूमा पनि फरक आउन थालेको छ । यस दिन चेलिबेटि घरमा बोलाएर दर खुवाउने गरिन्छ । माइतीघर वा आफन्तकहाँ तथा आफ्नै घरमा खिर, हलुवा, अचार,घिउ, दही, दूध, मिठाइ, फलफूल लगायतका मिठा परिकारलाई दरको रुपमा खाने गर्दछन् । दरखाने समय र स्थान यस जिल्लामा ठाउँ अनुसार फरक फरक रहेको छ । कतै साँझमा अन्य चीज नखाई दर खाने प्रचलन छ भने कतिपय ठाउँमा पहिला खाना खाएर मध्य रातमा दर खाने गरिन्छ ।
हाम्रो गाउँघरमा पनि पहिले खाना खाएर सबैचेली मिलेर नाचगान गर्ने दर पकाउने र मध्यरातमा सबै जना मिलेर दर खाने चलन छ । कसैले छुट्टाछुट्ै पनि खान्छन तर अधिकाँशले सामुहिक रुपमा दिदी बहिनी मिलेर दर खान्छन । दर खाएको भोलीपल्ट व्रत बस्ने भन्दै त्यसको आडका लागि अघिल्लो साँझ पौष्टिकतत्व भएको खानेकुरा खाने चलन रहेकाले दर खाने गरिन्छ ।
तीजको व्रत किन ?
हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले आफुले महादेवलाई पति पाउँ भनि शिव भगवानको पुजाआराधना गरी निराहार ब्रर्त बसेको र भगवान शिवलाई पतिको रुपमा पाएको धार्मिक आस्था रही आएको छ । त्यसैले यो दिनमा हिन्दु नेपाली नारीहरु आफ्नो मनोकाँक्षा पुरा हुने बिश्वासले तीजको व्रत बस्ने गर्दछन ।
खासगरी अविवाहिता महिलाह आफुले योग्य वर पाउँ भन्ने कामना राखेर तीजको व्रत वस्ने गर्छन भने विवाहिता महिलाहरु आफ्नो श्रीमानको दीर्घायु र सुस्वाथ्यको कामना गर्दै तीजको व्रत बस्ने गर्छन्। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल तृतीयाको दिन अर्थात भगवान श्रीकृष्ण जन्मेको एघारौ दिन लाई हरितालिका तीज भन्ने गरिन्छ।
मैले थाहा पाउने बेला मनाईने तीज र अहिले मनाईने तीजमा धेरै फरक छ । मैले बुझ्ने हुँदाको तीजमा बिहे गरेर पराइ घरमा गएका छोरी चेलीहरु माइती घरमा आउने वर्षभरी घरको काम धन्दाले माइतीको आगनमा पुग्न नपाएका छोरीहरु दर खाएर रमाइलो गरी, दुख पिर र खुसी पनि गित मार्फत पोखेर रमाइलो गर्ने गर्थे ।
माइतीमा जम्मा भइ खासगरी आमाले माया गरि पकाएका परिकारहरु मीठो मानेर दर खान लाई पनि तीज पर्व कहिले आउला भनेर कुर्नु पथ्र्यो । तर अहिले त्यस्तो छैन् । आमाले पकाएको खाने कुराको त्यती महत्व रहेको पाईदैन् । अहिले साथी संगी मिलेर घर बाहिर तिर गएर दर खाने प्रचलन बढेको छ । जुन कुरा मैले पटक पटक उल्लेख गरेको छु ।
तीजको दिनमा निराहार पानी पनि नपिएर व्रत बस्नु पर्छ भन्ने गलत धारणा हाम्रो समाजमा अझैपनि कायमै छ । मैले व्रत बसेको बेला फलफुल र दुध खाएको देख्दा अन्य दीदीबहिनिले यसरी पनि व्रत बस्छन त भन्दै हाँसोमा उडाउनु हुन्छ ।यसले भोग खटाउन सक्दैन त्यसैले खाई भन्दै गिज्याउछन पनि तर मैले सधैं उहाँहरुलाई अनुरोध गर्दा उहाँहरु खाएर पनि के व्रत बस्नु भन्छन् ।
वैज्ञानिक हिसाबले पनि हप्तामा एक दिन खाली पेट बस्नु राम्रो हुन्छ । तर स्वास्थ्यको ख्यालै नगरि निराहार व्रत बसिएन भने मनोकामना पुरा हुदैन भन्ने कुनैपनि धर्मशास्त्रमा लेखिएको पाईदैन् । अनि किन आपैmले नभएको कुराको पछाडी लाग्नु त त्यसैले व्रत बस्दा फलफुल र पानी खाँदा कुनै पापदोष लाग्ने हुदैन् ।
खास गरी आजभोली स्वदेशमा मात्रै होइन विभिन्न काम ब्यवसाय विशेषले बाहिरिएका नेपालीहरुले विदेशमा पनि यो पर्व धुमधामका साथ मनाउने गर्छन। यो क्रम बिगतका बर्षमा भन्दा बाक्लीदै पनि गएको छ। सँगसँगै तीज पर्वको परिभाषा पनि फेरिएको छ। एकातिर महिनौ अघिदेखि दर खुवाउने बहानामा देखावटी बढेको छ भने विभिन्न पाटी प्यालेसमा हुने नाचगान र दर खुवाउने बहानामा तीज खर्चालु समेत बन्ने गरेको छ।
तर अब हामीले यस्तो विकृतिलाई हटाएर आफुमा सुन्दर भन्दा शिक्षित बन्न सक्ने क्षमता बनाउने पर्वका रुपमा मनाउनु पर्छ। कति कुराहरु संस्कृतिको नाममा नकारात्मक छन् जुन पक्ष हामीले त्याग गर्न पनि सक्नुपर्छ । सकारात्मक कुराहरु र हाम्रा संस्कारहरु पछिल्लो पुस्तासम्म जोगाई राख्नुपर्छ । हामीले नै सकेनौ भने फेरी विकृति पनि हामीले नै सुरु गरेको ठहरिन्छ । यति धेरै महत्व बोकेको तीजलाई साच्चीकै तीज जस्तै बनाऔ । भड्किलो भन्दा सन्देशमुलक तीज मनाऔं । तीजको सबैलाई शुभकामना ।